दशैंमा यस्तो खानाबाट रहौं टाढा ! - Himalayan Kangaroo
दशैंमा यस्तो खानाबाट रहौं टाढा !
Posted by Himalayan Kangaroo | १३ आश्विन २०७४, शुक्रबार ११:१३ |
काठमाडौं । दशैंमा नचाहँदा नचाँहदै जो कोहीले पनि खानपिनमा हेलचेक्र्याइँ गर्न सक्छ । दशैंमा सम्भवत सबैको भन्सामा मासुका परिकारहरु मुख्य हुनेगर्छ । विजया दशमी ‘मिठो खाने, राम्रो लाउने’ पर्वको रुपमा पनि लिने गरिएको छ ।
दशैंमा माछा, मासु, मिठाइ, चिल्लो, पिरो, अमिलो खाने गरिन्छ । यस्ता खानाले स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेमा हामीले सचेतता अपनाउनु पर्ने हुन्छ ।
चिल्लो र बोसोदार खानेकुराबाट बच्न चिकित्सकको पनि सुझाव छ । चाडपर्वमा खानालाई बढी महत्वको रुपमा लिने गरिन्छ । पहिले–पहिले मीठोमसिनो खानका लागि दशैं पर्खिएर बस्नु पथ्र्यो । आजभोलि हुने खानेहरुले हरेक दिनजस्तो मासु लगायत मीठोमसिनो खाइरहेका हुन्छन् ।
खासगरी खसीको मासु स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले राम्रो मानिदैँन । यसमा यनिमल फ्याट बढी हुन्छ । खाँदा रक्तनलीमा बोसो जम्दै यसले बिस्तारै हृदयघात हुने चिकित्सकहरुको भनाई छ । मुटुरोगीका लागि खसीको मासु खानु समस्या हुने उनीहरुको भनाइ छ । तै पनि दशैंमा खसीको मासु निकै प्रयोगमा आउने गर्दछ ।
चिकित्सकहरुका अनुसार हामीले पाउने क्यालोरीको ६० प्रतिशत कार्बोहाइड्रेड, २० देखि ३० प्रतिशत प्रोटिन तथा बाँकी चिल्लोबाट लिन्छौं । चिल्लो पदार्थको रुपमा भेजिटेबल वोइल, काजु, बदाम, ओखर आदि खान सकिन्छ । स्वास्थ्यका लागि बोसो निकालिएको मासु, माछा तथा कुखुराको मासु खानु राम्रो हुन्छ ।
स्वास्थ्यका लागि दुई खुट्टे जनावरको मासु राम्रो हुन्छ । भेजिटेरियनका लागि गेंडागुडी, दुध, दहीका साथै सलाद खान सकिन्छ । दशैंको चिल्लो पदार्थ, गुलियो मिठाइहरु गरिन्छ यस्ता खानाले मधुमेह तथा मुटुरोगका बिरामीहरुलाई उच्च जोखिममा पुर्याउने गर्छ ।
पछिल्लो समय दशैंमा मादक पदार्थ सेवनलाई अनिवार्य जस्तै मान्न थालिएको छ । मादक पदार्थले सुगर बढाउन सक्छ । उच्चवर्गीय परिवारका मानिसहरु जसले हरेक दिन खानको ब्यालेन्स मिलाएर खान्छन, उनीहरुलाई चाडपर्वको समयमा पनि खानाको ब्यालेन्स मिलाएर खान जरुरी हुन्छ । यसो गरिएमा तत्कालीन तथा दीर्घकालीन रोग लाग्नबाट बच्न सकिन्छ ।
दशैंमा खसीको मासु, बियर, अमिलो, पिरो तथा चिल्लो भएका खानेकुराहरु अत्यधिक मात्रामा खाने गरिन्छ । बियर, हार्ड ड्रिङ्स तथा सफ्ट ड्रिङ्सको सेवनले मानिसको रक्तचाप बढाउने काम गर्छ । कुनै पनि कारणले रक्तचाप बढेमा त्यसको प्रत्यक्ष असर मृगौलामा पर्दछ ।
दशैंमा सन्तुलित खाना नखादाँ मृगौला मात्र नभएर शरीरमा विभिन्न समस्याहरु देखापर्न सक्छ । चाडपर्वको समयमा मासु मात्र नभएर फलफूल र सागसब्जीलाई मिलाएर खान सकेमा खानामा ब्यालेन्स ल्याउन सकिन्छ ।
बोसोयुक्त खानाको सेवनले शरीरका विभिन्न भागहरु जस्तै पेट तथा रक्तनली, मुटुको धमनीमा गएर बोसो जम्मा हुन्छ । जसले हृदयघात, पक्षघात हुने जोखिम रहन्छ । त्यस्तै, खुट्टामा बोसो जम्मा भएमा हिंड्दा खुट्टा दुख्ने तथा घाउ हुने हुन्छ ।
पिरोको सेवनले ग्याष्ट्रिक बढाउँछ । पेट पोल्ने हुन्छ । मासु बढी खाँदा अपच हुने र झाडा पखाला हुन सक्छ । यसका साथै दशैंमा बासी खाना खाने गरिन्छ । जसले झाडाबान्ता हुनुका साथै पेटमा इन्फेक्सन हुने सम्भावना हुन्छ ।
Previousदशैंमा लगाइने जमराको यस्तो छ विशेषता
Nextबलिवुड अभिनेत्री सोहा अलि खान छोरीकी आमा बनिन्
२५ चैत्र २०७५, सोमबार १३:०६
३ माघ २०७५, बिहीबार ०८:१७
४ श्रावण २०७५, शुक्रबार ०९:२३